Kuthengiswa izindlu ezi-4 kwigumbi elinombono wolwandle
Real Estate Listings: » Residential homes » Apartments » FR » Antibes » Kuthengiswa izindlu ezi-4 kwigumbi elinombono wolwandle1
France, Provence-alpes-cote D'azur, Antibes, 06600
France, Provence-alpes-cote D'azur, Antibes,
Unyaka wokwakha: 2004
Ikhowudi yeposi: 06600
Iimbonakalo: Air conditioning
Intle kakhulu igumbi eli-4 kwigumbi elinomthi kunye neentyatyambo elinephuli yokuqubha kwiindawo eziphakamileyo zeAnbb. Indawo yokuhlala eNtofontofo idume kakhulu eAntibes, le ndlu ijongelwe kumazantsi mpuma kumgangatho ongaphantsi komhlaba ..... Le ndlu inomnyango wokungena, igumbi elikhulu lokuhlala elinekona esemazantsi / empuma kunye nethala lembombo elinzulu le-40 m2 ngombono we isikwere inqaba kunye nolwandle. Ikhitshi yanamhlanje, ezimeleyo. Igumbi lokulala elikhulu eline-balcony ukuya elwandle kunye neshawari / lokuhlambela nendlu yangasese, amanye amagumbi amabini anebhalkhanya enkulu ejonge igadi. Isithintelo esikhulu kuwo onke amagumbi okulala. Igumbi lokuhlambela elineshawa, isinki nendlwana yangasese. Indlu yangasese ezimeleyo. Ukusuka kwindawo yokutyela unokufikelela kwigadi eyimfihlo enomhlaba engama-525 m2 kunye nesibini sesetyana kunye negumbi lokuhlambela kunye neworkshop. Inomoya ophefumle ngokupheleleyo (eguqukayo). Okuqhotyoshelwe: kwigaraji enye eyi-1, i-1 cellar, iindawo zokupaka zasimahla zepropathi.
Ibhaliswe kwi 16. Mar 2020
Nxibelelana nentengiso 003342232xxxx
Khetha udidiAccommodations Spare roomsResidential homes Houses Apartments Flats Townhouses Studios Villas Cottages Bungalows HomesLand lots Agricultural Land Industrial LandCommercial Real Estate Hotels Office spaces Business Premises Industrial premisesAll Others Real Estate Ecological Housing
Ibhaliswe kwi March 16, 2020
France, Provence-alpes-cote D'azur, Antibes
&nbspAntibes in Provence-alpes-cote D'azur (France), 06600
| 1 iibhedi
| 3 iibhedi
Zonke iindidiIndawo yokuhlalaAmakhaya okuhlalaIqashiso lomhlabaUkuthengisa izindlu nomhlabaBonke abanye abaThengisi beNdawo